HBOT - Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric
Home/HBOT - Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric
HBOT - Daaweynta Oxygen ee Hyperbaricteknamfg2018-01-20T19:07:13+00:00
Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric
Waxtarrada HBOT / Saameynada Waxyeelada
HBOT - Daawada Hyperbaric
HBOT waxay ku lug leedahay neefsashada 100% oxygen ee ku jirta weelka cadaadiska ah (Hyperbaric Oxygen Chamber). Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric waa daaweyn si fiican loo aasaasay oo loogu talagalay jirro hoos-u-dhac ah oo ka yimaada shubanka quusidda shilalka.
Qolka Hyperbaric Chamber, cadaadiska hawada ayaa la kordhiyay si ka badan cadaadiska atmospheric iyo bukaanka neefsanaya Oksijen iyada oo loo marayo nidaamka maskaxda ama nidaamka. Deegaankani sambabadaada ayaa ku faafi kara oksijiin badan intii laga yaabo inay suurtogal tahay in uu neefsado oksijiin saafi ah ee cadaadiska atmospheric caadi ah.
Dhiiggu siduu kor u kaco heerka O2 (Oxygen) iyada oo loo marayo jidhkaaga, Oxygen dheeraad ah wuxuu ka caawiyaa habka bogsashada ee dhowr ah oo muujinaya astaanta.